ဝယ်ရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောကျောက်တံတားများရှာဖွေရန် - အဆင်ပြေပါသည် - အိမ်
#actagainstabuse သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ထုတ်ကုန်များ အောင်မြင်သူ အခြား အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု မိတ်ကပ် Celeb ကြည့်ပါ
Soapstone, Granite and Marble: ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ကြည့်ရအောင်
Soapstone, စကျင်ကျောက်၊ ကျောက် - စစ်မှန်သောကျောက်တုံးများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဇာတ်ကောင်များပြားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျောက်စိမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်လည်းပိုမိုနီးကပ်စွာစိုးရိမ်ပူပန်ရမည့်ကျောက်စိမ်းစျေးနှုန်းများနှင့်လည်းပါလာသည်။ ကျနော်တို့ယောက်ျားတွေ၊ သုတေသနအချို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာအလွှာဆီကိုမသုံးပဲ၊
သက်ဆိုင်သော: ကျနော်တို့ချက်ချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာပါတယ်7မီးဖိုချောင်ကောင်တာခေတ်ရေစီးကြောင်း
Richlite / ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
သင် SOAPSTONE ကိုနှစ်သက်လျှင် RICHLITE ကိုစမ်းကြည့်ပါ
Soapstone သည်တိုင်းပြည်၏အိမ်သူအိမ်သားကျက်သရေနှင့်အတူအချိန်ကုန်ဆုံးနေသည်။ အလွန်ဆိုးသည်က၎င်း၏တောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အဆက်မပြတ်ဆီလောင်ရန်လိုအပ်ပြီးအသစ်ဝယ်ရန်ကံဇာတာအနည်းငယ်သာကုန်ကျသည်။ ဤတွင်အလားတူဗေဒနှင့်အတူ nifty အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်: ကျောက်စိမ်း မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းအတွက်ခဏတစ်နည်းနည်းရှိခြင်းရဲ့, (ကအာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဇစ်မြစ်နှင့်အတူ) စက္ကူ -based ပေါင်းစပ်။ ဒီဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းသည်မာကြောသောပစေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော hyper-compressed paper များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ P.S. သငျသညျကိုအလွယ်တကူသူတို့ပေါ်လာအဖြစ်ချွတ်ယွင်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ Tr .s နောက်ဆုံးပေါ်။
Soapstone: $ 70- $ 120 / စတုရန်းပေ
Richlite: $ 45- $ 75 / စတုရန်းပေ
ကြည့်ပါ အနက်ရောင်စိန်အတွက် Richlite
သငျသညျ MARBLE ကိုချစ်လျှင်, Neolith ကြိုးစားပါ
Creamy, သွေးပြန်ကြောဖြူစကျင်ကျောက်ကောင်တာများသည်သန့်ရှင်းသော Grail ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့သုတေသနပြုမိသောသူမည်သူမဆိုသိတယ်အဖြစ်, သူတို့သည် (အနီရောင်စပျစ်ရည်ယိုဖိတ်တက်စိမ်ဖို့ခေါ်) စိမ်ပါပဲ။ အိုးအရမ်းစျေးကြီးသည်။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်အသစ်? Neolith : သိသိသာသာယုံကြည်စိတ်ချရသောစကျင်ကျောက်ကဲ့သို့သောကြွေပြားများကိုအင်ဂျင်နီယာကြွေပြားများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပေါင်းစပ်ထားသောကျောက်စိမ်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကိုနှစ်သက်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်အပူနှင့်အစွန်းအထင်းဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်အားလုံးနီးပါးဖြစ်သော psst: စျေးနှုန်းအချက်သည်ကျောက်ပြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
စကျင်ကျောက်: $ 70- $ 100 / စတုရန်းပေ
Neolith: ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်အရအကြမ်းဖျင်း $ 20- $ 40 / စတုရန်းပေ။ (သို့သော်သတိပြုရန်မှာစျေးနှုန်းသည်ပုံစံ၊ အထူ၊ အပြီးသတ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏စျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ )
ကြည့်ပါ White Carrara အတွက် Neolith
အကယ်၍ သင်သည် GRANITE ကိုနှစ်သက်မည်ဆိုလျှင် GRANITE TRANSFORMATION ကိုစမ်းကြည့်ပါ
သေချာတာပေါ့, ကျောက်တည်မြဲဆွဲဆောင်မှုနှင့် Hardy အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးတံဆိပ်ခတ်လိုအပ်ပါတယ်, chip နိုင်ပါတယ်, နှင့်, yup ကြောင့်ပါပဲ သတောပဲ စျေးကြီး။ ဒါကြောင့်ငါတို့တူးကြတာပေါ့ ကျောက်အသွင်ပြောင်း ကုန်ကျစရိတ် - ပါးရည်နပ်ရည်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်။ ဤပေါ့ပါးသောစာရွက်များသည်သဘာဝကျောက်တုံးနှင့်ပေါ်လီမာ (ရောစပ်ထားသောအစေးရောနှောမှုအတွက်အသုံးဝင်သောစကားလုံး) နှင့်ရောစပ်ပြီးကျောက်ပြားနှင့်တူသည်။ အအေးနေတုန်းပဲ? ဒီပစ္စည်းဟာသင့်ရဲ့လက်ရှိကောင်တာတွေပေါ်မှာလက်ျာလက်နဲ့အံ ၀ င်ခွာကျဲကျဲဖြတ်ထားတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ပင်သရုပ်ပြဘို့ပေးဆောင်စရာမလိုပါ။ မင်္ဂလာပါ။
ကျောက်: $ 50- $ 200 / စတုရန်းပေ
ကျောက်အသွင်ပြောင်း: $ 50- $ 60 / စတုရန်းပေ
ကြည့်ပါ Nero Stella အတွက်ကျောက်အသွင်ပြောင်း
သက်ဆိုင်သော: Marble Countertops ရှိရင်သိထားသင့်တဲ့အချက် ၃ ချက်
Categories ရေရှည်တည်တံ့သောမီးဖိုချောင် Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် ကြည့်ရမယ်